အမြိုးသမီးမြားနှငျ့အတူ "အံ့သြစရာ, အချစ်ဇာတ်လမ်း," တွဲဖက်၏မကြာခဏကျနော်တို့အယူအဆ, ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့် - လူတို့သညျတစျဦးမဟုတ်သလိုအခြားချင်ပါဘူးမပါလျှင်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးပါ! ထို့ကြောင့်, ရင်ခုန်စရာအံ့သြဖွယ်များ၏စိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့, အခြေအနေဆိုးအားပြုပြင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားတွေနှစ်သက်တစ်ခုခုစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင်တန်း၏ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြကုန်အံ့။
ရုပ်ရှင်ရင်ခုန်စရာလက်ဆောင်များနှင့်အံ့သြဖွယ်များ၏နမူနာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းကျနော်တို့ကဖယောင်းတိုင်နှင့်နှစ်ယောက်အတွက်ညစာအတူညဥ့်ဖြစ်ရပါမည်ထင်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤဦးတည်ချက်အတွက်ရင်ခုန်စရာစိတ်ကူးများအဘို့အကြည့်ဖို့ဆက်လက်။ သို့သော်ထိုသို့ချစ်ရသူတစ်ဦးစျေးကြီးသောစပျစ်ရည်နှင့်အတူအစဉ်အလာအရိပ်မပါဘဲလုပျနိုငျများအတွက်ရင်ခုန်စရာအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်ကလပ်မှာရက်ချိန်းရှိပါကဥပမာ, သင်က DJ သမားတွေနဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူကသင့်ရဲ့သီချင်းအဘယ်သူကိုအဘို့သူမနှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြတစျခုအတှကျအများအပြားလှပချိုမြိန်စကားလုံးများကိုမတိုင်မီကဆိုသည်။
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ခံစားချက်တွေကိုအများပြည်သူ display ကိုကြိုဆိုပါတယ်မပါဘူးဆိုရင်ကြောင့်အမှု၌, သင်ရုံသငျတို့နှစျယောကျအတှကျတစ်ခုခုကိုပွငျဆငျနိုငျပါ။ လတ်ဆတ်သောလေထုထဲတွင်နေထိုင်နှင့်ဆက်စပ်သောသင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်လူအဘို့အစိတ်ကူးများရင်ခုန်စရာအံ့သြဖွယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်သူတို့ကဥပမာအားဖြင့်သာမန် outing ရင်ခုန်စရာအရောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်နေကြသည်:
ဒါပေမယ့်သူအသငျသညျရပ်တန့်ရဲ့စတင်နေ့စွဲပုံမှန်မဟုတ်သောပါသလဲ ဟီလီယမ်နှင့်အတူရှည်လျားသော string ကိုနှင့်ပူဖောင်းများတစည်းခြင်း, ဆေးသုတ်, (အလင်းကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ဒီအံ့သြစရာဘို့စက္ကူ tracing လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ (2x1.5 မီတာ၏အရွယ်အစားခန့်) စက္ကူ tracing တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းတွင်ကြင်နာစကားများအကြိုက်ဆုံးရေးပါ။ ရလဒ်ပိုစတာထံမှပူဖောင်းများနှင့်ရှည်လျားသောငါးဖမ်းလိုင်းစွဲစေ။ မီးသီးတိုက်ခန်းအကြိုက်ဆုံး၏ပြတင်းပေါက်ပိုစတာနှင့်ငါးဖမ်းလိုင်းချွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ဖတ်မတိုင်မီဒါကြောင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျံသွားပါဘူး။
ကောင်းပြီ, သင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရိုက်နှက်, တစ်ဦးရင်ခုန်စရာညစာချင်လျှင်။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦး avid ဂိမ်း (သင်တန်း၏, သင့်ရဲ့ညဦးယံအချိန်အိမ်မှာမရကြလိမ့်မည်ကိုမဟုတ်လျှင်), သငျသညျကအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်နေရာရှာဖွေဖို့စူးစမ်းမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကစားသမားတစ်ဦးသဲလွန်စများအတွက်တစ်ဝက်မြို့မှတဆင့်သွားကြဖို့ရှိသည်ပါဘူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကြိုတင်စီစဉ်ထားပါ။ ပထမဦးဆုံးအောက်ပါကားထဲတွင်ဝှက်ထား, e-mail, သို့မဟုတ် SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုအားဖြင့်စူပါမားကက်ကိုစလှေတျနိုငျသညျ။ သူတို့က, လည်း, သင့်အကြိုက်ဆုံးအကြံပေးချက်များမှပေးခဲ့နိုင်အောင်လည်းသင်, မိတ်ဆွေတွေနဲ့အသိအကျွမ်းသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူကိုအချိန်မတိုင်မီကုန်မဟုတ်သောရှာပုံတော်ရှည်လျားလွန်းပြီးရှုပ်ထွေးပဟေဠိမလုပ်ကြပါဘူး။
ထိုညဉ့်တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ပြင်ဆင်အနားယူရန်လိုအပ်နေတဲ့လူကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာ dvoih- ပူးတွဲဧည့်ခံဗတ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးစိတ်ကူးရှိသည်။ ကောင်းပြီ, သင့်အာဏာရအချစ်ဇာတ်လမ်း add - သင်တို့အဘို့ဖယောင်းတိုင်, aromomasla, စတော်ဘယ်ရီ, အချိုရည်, ချောကလက်, မွှေးကြိုင်ရေမြှုပ်နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားဝတ်စုံ။ အတွင်းခံသည့်အခါစိုစွတ်သောပွင့်လင်းဖြစ်လာ (ယောက်ျားတို့အတွက်ကအပြည့်အဝအဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်ထက် ပို. ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်), ကပုံစံ-သငျ့, ခွက်, mesh များနှင့် thingies ပိတ်ပင်ထားဖြစ်သင့်သင့်ပါတယ်။
ငါအမြှုပ်ထဲမှာညနေပိုင်းတွင်ဖြုန်းဖို့မလိုချင်သလဲ? ချောကလက်ထဲမှာဖြုန်း! ချစ်သောမှတင်သွင်းတစ်ချောကလက်ဂျယ်လ်နဲ့ရေချိုးခန်းယူခြင်း, ကိုယ်နှင့်အခန်းထဲမှာကိုယ်နှိုက်များအတွက်ချက်ပြုတ် (သူရှေ့ဆက်အချိန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မပျော်ရွှင်မဟုတ်ခဲ့ပေစင်္ကြံထဲမှာ note ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်) ။ နေရာတိုင်းချောကလက်ချောကလက်၏ရနံ့နှင့်အတူဖယောင်းတိုင်ထွန်းညှိ, တင်. ကောင်းစွာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမေ့မလြော့ပါ - ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ချောကလက်ထားသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ချောကလက် panties အပေါ်ဆွဲပါ။
သငျသညျ (ထိုနေ့၏အဆုံးတိုင်အောင်အပင်ကိုပိုနေ့လည်ခင်းလက်ဝဲ) အဲဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်ရင်ခုန်စရာအံ့အားသင့်စရာသူ့ကိုသင့်ရဲ့ panties နဲ့အံ့သြဖွယ်ကှကျနှငျ့သငျသူ့ကိုလွဲချော်ဘယ်လောက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများနှင့်အတူမှတ်စုတစ်ခုပို့ချင် (ကခငျြ) နှင့်သင်ဤအိမ်သာ၏ဘာသာရပ်စေလိုလျှင် သင်တို့အပေါ်မှာဝတ်ဆင် / သင်သည်မိမိလက်ကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သာသူတို့တစ်တွေနည်းနည်းဖျန်းရေမွှေးနိုင်ပါတယ်, sexy အသစ် panties လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ (မအလုပ်မှာ) အကွာအဝေးအတွက် Romantic ခစျြ၏အံ့သြဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်း - ဖုန်းကိုလိင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဖုန်းသို့ချိုမြိန်သောစကားကိုပြော, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့် frame ကိုမသွား? မဖြောင့်တင်းကြပ်စွာကအတိုင်းလိုက်နာရန်နှင့်သေချာဖြစ်မည်ဟု, ကြိုတင်ရေးထားလော့။ ကောင်းပြီ, စကားသံကိုအကြောင်းကိုမမေ့မလြော့ပါ - ဒါကြောင့် velvety နှင့် sexy ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင် - လူတယောက်သည်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သင်ယူဖို့ကိုဘယ်လို
အဘယ်ကြောင့်ခင်ပွန်းမရနိုငျသညျ - အကြောင်းရင်း
တစ်ဦးကလက်ထပ်လူနှင့်တစ်ဦးလက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး - ဆက်ဆံရေး၏စိတ်ပညာ
ပယင်း Heard တစ်ဘီလျံနာ Elon Musk လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်
မျက်နှာပေါ်မှာအရေပြားအောက်ဆုံးဝက်ခြံ - ကနှိပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး, ပြုမူဆက်ဆံ!
ရာခေလသည် McAdams နဲ့ Selma တိုနီဘလဲဂျိမ်းစ် Toback ဒါရိုက်တာအလွဲသုံးစားမှုကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များကိုပြောသည်
တစ်ဦး snowman အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Jay-Z အချမ်းသာဆုံးအဆိုတော်များ Forbes မဂ္ဂဇင်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထိပ်ဆုံး
တစ်ဦးထောပတ်သီးကြီးထွားဖို့ကိုဘယ်လို - အကောငျးဆုံးနညျးလမျးမြား
Herring ၏ mincemeat များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစာရွက်
တက်ဘလက်ကိုဖွင့်မထားပါနဲ့ - ဘာလုပ်ရမှန်း?